बलात्कारका आरोपी आशारामसँग मोदीको भिडियो सार्वजनिक (भिडियो सहित) | Canadian Reporters
बिहारमा चुनावी वातावरण तातिरहेको बेला जनता दल युनाइटेडले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विवादास्पद भिडियो सार्वजनिक गरेको छ ।
हालैमात्र एकजना तान्त्रिकसँग बिहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारको तस्वीर सार्वजनिक भएपछि मोदीले आफ्ना चुनावी सरकारमा उक्त तस्वीरलाई लिएर जनता दलमाथि ठूलो हमला गरेका थिए । मोदीले भाषणमा तन्त्र मन्त्र चाहने या विकास चाहने भन्दै नितिश कुमारको आलोचना गरेका थिए ।
तर अहिले तिनै नरेन्द्र मोदी जनता दल युनाइटेडले जारी गरेको भिडियाका कारण आलोचित बनेका छन् । सार्वजनिक गरिएको भिडियोमा प्रधानमन्त्री मोदीलाई बलात्कारको आरोपमा जेलमा रहेका आशारामसँग देखाइएको छ । आशाराममाथि बलात्कार, यौन उत्पीडन, अवैध सम्पत्ति जम्मा गर्नेलगायतका दर्जनौं मुद्धाहरु चलिरहेका छन् ।
भिडियोसितै नरेन्द्र मोदीका कैयन अन्य तस्वीरहरु समेत सार्वजनिक गरिएका छन् । यी तस्वीरहरुमा मोदी बिभिन्न धार्मिक बाबाहरुसँग देखिन्छन् । मोदीले धर्म निरपेक्ष भारतमा हिन्दू आतंकवाद लाद्न खोजेको प्रमाण दिन शंकराचार्य, सत्य साईं बाबा, श्री श्री रवि शंकर, बाबा रामदेव, आसाराम और दिगंबर जैन मुनिहरुसँ मोदीका तस्वीर जनता दलले सार्वजनिक गरेको छ ।
तान्त्रिकदेखि ढाेंगी बाबाहरुसँ संगत गर्ने मोदीले अरुलाई आरोप लगाउनु नैतिकताले नदिने भन्दै नितिश कुमारले प्रश्न गरेका छन्– अरुलाई नैतिकताको पाठ सिकाउने मोदी आशाराम जस्तो बलात्कारीसँग के गर्न गएका थिए ?
जनता दल युनाइृटेडका प्रवक्ता सञ्जय सिंहले भने, “मोदी भन्छन, उनलाई तन्त्र मन्त्र माथि विश्वास छैन । त्यसो भए उनी बलात्कारी बाबासँग केगर्न गएका थिए ? उनलाई आशारामबाट आर्शीवाद लिने आवश्यकता किन पर्यो ?”
हालै मात्रै प्रसिद्ध ज्योतिषी बेजान दारुवालासँग समेत मोदीको तस्वीर सार्वजनिक भएको थियो । उक्त तस्वीरमा मोदीले आफ्नो हात देखाउँदै गरेका थिए ।
एनआरएनएको प्रथम काठमाडौँ बिज्ञ सम्मेलनबारे रिपोरटिंङ्ग !!